I-2 hp i-motor motor i-3450 rpm tefc, i-2hp 240v kagesi yesigaba esisodwa sikagesi
2 hp kagesi isigaba esisodwa motor 3450 rpm tefc, 240V
I-2hp motor kagesi iyathengiswa
Amavidiyo we-2hp kagesi wezimoto
Ukucaciswa kwe-2hp motor kagesi
I-2hp motor motor 1750 rpm, 2hp Electric motor 3 phase, 2hp motor motor motor with VFD, 2hp motor motor 1750 rpm isigaba esisodwa.
Uhlobo luni lwe-2hp motor motor?
2hp motor kagesi isigaba 3 no-2hp isigaba sikagesi esisodwa; Uhlobo lwe-2hp kagesi we-AC nohlobo lwe-DC; 2 hp 56c motor motor kanye no-2 hp IEC motor motor.
Imoto kagesi engu-2hp ene-VFD ingenza isivinini esiguqukayo, Inhloso Jikelele yokufeza ukukhula okuphawulekayo kule mboni.
Kungani ukhethe imoto yethu kagesi ye-2hp?
Njengomphakeli we-motors wembulunga yonke, Sinikeza uhlu lwekhwalithi ye-premium yekhwalithi ye-2hp motor motor. Isungulwe njengeSole Proprietorship firm ngonyaka we-2003.
Ikhwalithi Emangazayo Ye-2hp Electric Motor
Zonke izinhlobo ze-2hp motor motor 110V, 2hp kagesi motor 3450rpm, 2 hp 56c ifreyimu motor, i-2 hp kagesi yesikebhe.
I-Premium Efficiency Seuty Duty Motor, enayo yonke i-Copper Wire ngaphakathi, Ukusebenza kahle: 86.0%; Ukuvalelwa: Kufakwe ngokuphelele, ukwahlukanisa okuphezulu. 2hp motor motor amps nge performace ephelele.
Ukulungela okungcono nokuqeda, Ukuphonswa kwekhwalithi, Ukukhwela kunoma iyiphi indlela, ishaji ye-AISI 4140 shaft, Kulula ukufunda i-nameplate yensimbi engagqwali.
Kunezinhlobo zonke zama-2 hp motors kagesi esitokweni futhi sizothumela zingakapheli izinsuku ezi-2 uma sesitholile ama-oda akho.
Yonke imininingwane isekelwa yiwaranti engu-2year. Ubunjiniyela bethu bulungiselela okungalindelekile, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngezinkinga ze-2hp motor kagesi.
I-motor yethu kagesi ye-2hp izogcina ukusebenza kwakho kusebenza futhi isebenza kahle, ngokujikeleza okuqondile okulinganiselwe, ukuthwala okwenziwe ngokweqile, ukufakwa kwe-inverter duty Class H ukufakwa, ukulingana okungcono nokuqedela.
Isiqephu esisodwa Ukuthumela
Njengomenzi, sisekela ukuthengisa ngokususelwa kuyunithi elilodwa. Kusetshenziswe Kakhulu Kwabaphakeli, Abadingisi, Abalandeli, Abahamba Ngezitolo, Ama-compressors, Ama-washer Wokufafaza, Ama-grinders, ama-lifetter noma Amaphampu.
I-General Injongo I-Industrial Electric Motors 2hp ngensimbi noma yensimbi noma ifreyimu ye-Aluminium, ithuthukiswe ukuze ihlangabezane nezinhlelo ezihlukile zokusebenza okuhle kanye nomnotho.
I-2hp motor motor i-1750 rpm I-Fotally Turlated Totally, 2hp kagesi 1750 rpm iyatholakala ekwakhiweni kwe-Open Drip-proof ne-TEFC esigabeni esisodwa. Isigaba se-IronHorse 2hp motor motor 3 isigaba, shaft 24mm Electric motor single isigaba 240v se-samenti mixer. Inhloso ejwayelekile i-2 hp kagesi motor 1725 rpm isigaba esisodwa, i-2 hp kagesi motor isivinini esishintshashintshayo futhi isilawuli, i-1 / 2 hp motor motor, 2hp kagesi motor isigaba esisodwa.
I-Farm Duty 1hp motor motor kagesi, i -xpress 2hp motor kagesi ene-VFD, iCompressor Duty 2hp kagesi motor 110V, Full umthwalo currents 2hp Electric motor amps, 2hp motor motor 3450 rpm usetshenziselwa lapho kuchayeka khona amanzi, ukungcola nothuli, China 2hp kagesi. ukuthengisa, i-2 hp 56c ifreyimu motor Uhlaka 5 / 8 "Shaft single Phase 115 / 230 Volt 3450 RPM TEFC.
I-fan Pump Compressor General injongo I-2 hp kagesi yemoto 3450 rpm tefc, ukubonakala kwe-outboard 2 hp kagesi motor isikebhe, i-2 hp motor motor inamandla motor yesigaba esisodwa eyenzelwe ikakhulukazi ukusetshenziswa ngamasaha etafula.
LANDELA I-CATALOG yethu ye-PDF
I-2hp motor motor 1750 rpm isigaba esisodwa, i-2hp 240v i-motor single phase motor, i-2hp motor kagesi ene-VFD